जनताको काम गर्न कठिन मानेको छैन - Karobar National Economic Daily
जनताको काम गर्न कठिन मानेको छैन
query_builderAugust 25, 2017 2:41 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility409
भीम पराजुली मेयर विराटनगर महानगरपालिका
करिब डेढ दशक स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास–निर्माणले गति लिन सकेन । कर्मचारीका भरमा स्थानीय निकाय सञ्चालन हुँदा भ्रष्टाचार मौलायो । जनताले सामान्य कामका लागि सास्ती भोग्नुप¥यो ।
२०५४ सालपछि नयाँ संविधानअनुसार हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेका छन् । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको जनप्रतिनिधिसित जनताको धेरै आशा र भरोसा रहेको विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली बताउँछन् । अहोरात्र खटेर भए पनि जनताका आकांक्षा पूरा गरेरै छाड्ने पराजुलीको अठोट छ ।
डेढ दशकपछि आफ्नै घरआँगनमा जनप्रतिनिधि पाएपछि जनताको आकांक्षा बढ्नु स्वाभाविक रहेको उनी सुनाउँछन् । आफ्नो कार्यकालमा विराटनगरलाई भावी पुस्ताले गर्व गर्न लायक बनाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । कार्यभार सम्हालेको महिना दिन नबित्दै बाढी र डुबान समस्या झेल्नुपरेकाले विकासका योजना केही समय ओझेलमा परेको पराजुली बताउँछन् ।
बाढी र डुबानपछिको अवस्था, बाढीपीडितको पुनःस्थापना, राहत, भावी दिनमा आइपर्ने दैवी प्रकोपको सामना गर्ने पूर्वतयारी, विराटनगरको विकासका योजना, जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दाका चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर मेयर पराजुलीसित कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार ः
बाढीपीडितका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
हामीले बाढीपीडितका लागि धेरै काम गरेका छांै । बाढी आएकै दिन डुबानमा परेर जीवनरक्षाका लागि हारगुहार गरिरहेका कञ्चनबारी नोबेल हस्पिटलको बस्तीका १७ जनाको नेपाली सेनाको पूर्वी पृथना, इटहरी, सुनसरीबाट बोट झिकाएर उद्धार गरेका छौं ।
वडा नम्बर १२ को दरैया बस्तीमा राति बोट लगेर उद्धार गरेका छौं । तत्काल उद्धार नगरिएको भए धेरै नागरिकको ज्यानै जोखिममा पर्ने अवस्था थियो । तत्कालै खानेपानी, चाउचाउ, चिउरा तथा भुजा उपलब्ध गराएर खानाको व्यवस्था गरेका थियौं ।
बाढीको खतरामा परेका बस्तीको पहिचान गरेर उद्धार गरेका थियौं । महानगरभित्र झन्डै १२ हजार मानिसलाई जोखिमबाट बचाउन उच्च स्थानमा राखी पालको व्यवस्था गरिराखेका थियौं । गर्भवती र बालबालिकाका लागि उपचार र बस्ने उचित व्यवस्थापन गर्ने कामसमेत ग¥यौं । केशलिया र सिंघिया खोलाको छेउछाउमा बसोबास गर्नेहरू बाढीको बढी चपेटामा परेका छन् ।
अन्य बस्तीमा समेत बाढी पसेर धेरै धनजनको नोक्सान गरेको छ । यी सबै कुराको अहिले केही समाधान हुँदै आएको छ । अहिले महानगरले अपिल गरेर विभिन्न सामाजिक संघसंस्था, युवा तथा सुरक्षाका अंगहरू परिचालन गरेर फोहर व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । बाढीपीडितहरूको घर बनाउने र व्यवस्थित गर्ने अभियानमा महानगर लागिरहेको छ ।
केशलिया र सिंघिया खोलाका कारण विराटनगरमा धेरै क्षति भएको छ, यी खोलाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न महानगरसित के योजना छ ?
मैले माथि पनि भनें । विराटनगरका लागि यिनै खोलाहरू समस्या हुन् । केशलियाले त प्रत्येक वर्ष धेरैको ज्यान लिएको छ । अब यी दुवै खोलाको किनारमा बाँध बाँध्ने योजना ल्याउन आवश्यक छ ।
म यस विषयमा पहल गर्छु । मैले भनेको पनि छु, मन्त्रालयसँग पनि मैले यस विषयमा काम गर्न आग्रह गरेको छु । सबैको साथ–सहयोग भए हामी यी दुवै खोलाको छेउमा बाँध बाँध्न सक्छौं । यी दुवै खोलालाई विनाशका रूपमा नहेरेर विराटनगरको विकासका लागि वरदानका रूपमा हेर्न सकिन्छ । किनभने दुवैतर्फको किनारमा बलियो बाँध बाँधेर यसमा बोटिङ सञ्चालन गर्न सक्छांै ।
त्यसका लागि महानगरले दीर्घकालीन योजना बनाइरहेको छ । सीमित स्रोत–साधनले यी योजनाहरूलाई परिपूर्ति गर्न सम्भव छैन । त्यसका लागि दातृसंस्थाहरूसँग पनि छलफल अगाडि बढाएका छौं । तत्कालका लागि दुवै खोलाबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि महानगरले तत्कालै काम अगाडि बढाउँछ ।
खोला छेउछाउमा सुकुम्बासी बसेका कारण बढी क्षति बेहोर्नुपरेको भनिन्छ नि ?
वास्तवमा भन्नुपर्दा हिउँदमा खोलामा कम पानी हुन्छ र सुकुम्बासीहरू खोलाकिनारमा घर बनाएर बस्छन्, तर जब वर्षा सुरु हुन्छ अनि खोलामा बाढी आउँछ र बगाउँछ । यो समस्या विगतदेखिकै हो । जबसम्म सुकुम्बासीको व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन ।
सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित बसोबासका लागि महानगर एक्लैको प्रयासले सम्भव छैन । यसका लागि नेपाल सरकारले विशेष योजना अघि सार्नुपर्छ । सुकुम्बासी आयोगलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । यदि सिंघिया र केशलिया खोलाछेउछाउमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न सकिएमा पक्कै पनि हरेक वर्षामा हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ ।
अझै पनि बाढीपीडितले राहत नपाएको गुनासो छ नि ?
एकदमै गलत कुरा हो । हामीले राहत वितरणका लागि सर्वदलीय समिति पनि बनाएका छांै । वडाध्यक्षमार्फत बाढीपीडित पहिचान गरी राहत वितरण गरेका छौं । राहत मात्रै पूर्ण मानेर नबसौं भनेर हामीले भनेका छांै । घरबारविहीन भएका, अति विपन्न र बाढीका कारण मृत्यु भएका परिवारका लागि हामीले विशेष व्यवस्था मिलाएका छौं ।
फेरि पनि राहत पाइन्छ कि भनेर कतिले राहत पाए पनि पाएका छैनौं भनेर भनेको समेत भेट्टाएका छौं । त्यस्ता मानिसहरूको अनुगमन गरेर हेर्दा आवश्यकताभन्दा बढी सामान जम्मा गरेको समेत पाएका छौं । हामी यो कुरा दाबी गर्छाैं कि राहत सबैले पाएका छन् ।
कतिले गलत रिपोर्ट राखेर एउटै परिवारभित्र पनि बढी राहत लिने गरेकोसम्म हामीले पाएका छौं । राहत वितरणमा कोही छुट्नुभएको भन्ने मलाई लाग्दैन । कोही हुनुहुन्छ भने महानगर आउनुहोस्, हामी सबै कुरा बुझेर राहत दिन्छांै ।
महानगरका सबै वडामा पुग्नुभएको छ, उद्धार र राहत वितरणका लागि खास गरी बाढीपीडितका समस्या के–के छन् ?
बाढीपीडितका समस्या बग्रेल्ती छन् । ती समस्या सबै पूरा गर्न कठिन छ । हामीहरू क्रमशः समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छांै । बाढीप्रभावित क्षेत्रमा आवास व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको छ ।
खानपिनको प्रबन्धका लागि महानगरले काम गरिरहे पनि पूर्ण रूपमा समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । खोलाकिनार र सिंघिया तटमा बस्नेहरू धेरै भएका कारण उनीहरूलाई बस्ने स्थानको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
विराटनगरमा जारी ढल, नाला र सडक लथालिंग भएका कारण विराटनगर डुबानमा परेको भनिन्छ नि ?
डुबान हुनुको मुख्य कारण अति वर्षा नै हो । निर्माणाधीन सडकका कारण पनि ढल, नाला र सडकमा समस्या आएको हो । निर्माणाधीन समयमा हामीले केही सास्ती पाउँछांै नै । यति धेरै वर्षा धेरै वर्षको अन्तरालमा भएको पाइएको छ ।
केही हदसम्म वर्षाको पानी जाने निकास नभएकाले पनि कतिपय स्थान डुबानमा परेको देखिन्छ । तर, यसपटक धेरै ठूलो वर्षा भएकाले महानगरवासीले बाढी र डुबान समस्याको सामना गर्नुप¥यो ।
भावी दिनमा आइपर्ने यस्ता किसिमका दैवी विपत्ति सामना गर्न यस पटकको बाढीले के पाठ सिकाएको छ ?
वास्तवमा सबै कुरा केही भएपछि नै सिकिँदो रहेछ । केही वर्षअगाडि पहाडी क्षेत्रमा भूकम्पले थिलथिलो बनायो । अहिले तराईलाई बाढीले तहसनहस बनाएको छ । यो बाढीबाट हामीले धेरै कुरा सिकेका छौं ।
महानगरले अब आपत्कालीन उद्धार गर्ने टिम, मोटरबोट, उपचार गर्ने टोलीसमेत राख्नेछ । यसखाले अन्य पनि विपत्ति पनि आउन सक्ने कुराको पहिचान गर्न विज्ञहरूको सुझाव संकलन गर्ने योजना मैले बनाएको छु ।
यस्ता विपत्ति आइपरेको खण्डमा समाधान गर्न के–कस्ता योजना छन् ?
योजना त बनाउने हो । म जितेर आएको एक महिना बित्दै छ । अब के–के समस्या छन् तिनको पहिचान गरी सूचीकृत गर्छु । जे–जे समस्या आउँछन्, तिनका लागि पूर्वाधारसहित मेरो कार्यकालमा काम हुन्छ । जनताले मबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन्, त्यसलाई मर्न दिन्नँ । महानगरभित्र थुप्रै ऐलानी जग्गा छ । त्यो जग्गाको खोजी गरिरहेका छौं ।
ऐलानी जग्गामा हरेक वडामा कम्तीमा एउटा आश्रयस्थल बनाउने योजना छ । ताकि यस्ता दैवी विपत्तिबाट घरबारविहीन भएकाहरूलाई आश्रय लिएर बस्न सजिलो होस् । यसपटकको बाढीमा विस्थापितलाई राख्न धेरै समस्या भयो । विस्थापितलाई विद्यालयमा राख्दा पठनपाठन अवरुद्ध भयो । तसर्थ दैवी विपत्तिबाट विस्थापित हुनेलाई राख्नका लागि आश्रयस्थल निर्माणको योजना छ ।
विकासको काम गर्न सुरु गर्दागर्दै दैवी प्रकोप बाढी र डुबानको सामना गर्नुप¥यो, जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न कतिको कठिन रहेछ ?
हो, भर्खरै मात्र विकासका योजना बनाएर काम गर्न सुरु गरेका थियौं, हामी जनप्रतिनिधिहरूले त्यसै बेला यस्तो विपत्ति आइलाग्यो । म जनताको काम गर्छु भनेर होमिएको युवा भएकाले जनप्रतिनिधि हँुदा अझ खुसी लागेको छ र मैले जनताको काम गर्ने कुरालाई कठिन मानेको छैन । काम जुनसुकै पनि कठिन नै हुन्छ । यही कठिनाइका बीच जनतालाई आभास हुने गरी काम गर्छु भन्ने लागेको छ ।
महानगरको मेयरको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अहिलेसम्म के गर्नुभयो ?
एक महिनाभित्र महानगरका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, नगरका सबै पोलमा बत्ती जडान गर्ने र वडामार्फत घरघरमा वृद्धभत्ता वितरण गर्ने योजना ल्याएका थियौं । हामीले महानगरका सबै बाटोमा खाल्डाखुल्डी पुरेका छौं, पोलमा बत्ती लगाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वृद्धभत्ता वितरणको काम सुरु गर्ने तयारीमै छौं । नहरको बाटो ढाटदेखि रानीसम्म वैकल्पिक मार्गका रूपमा हामीले विस्तार गर्ने काम सुरु गरेका छौं ।
रफ्तारमा काम गर्दै गर्दा हामी बाढीको चपेटामा परेका छौं । सबै काम बाढीप्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् । अब हामी बाढीप्रभावितको समस्या समाधानसँगै आगामी तीन महिनामा गर्ने काम सार्वजनिक गर्नेछौं । क्रमशः पूरा गर्ने लक्ष्य छ हाम्रो ।
चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्नुभएका मुद्दा कति सम्बोधन भए अहिलेसम्म ?
घोषणापत्रमा भएका मुद्दा सम्बोधन हुन्छन् । यसमा आशंका नै नगरे हुन्छ । एक महिनामै सबै कुरा सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत हुन्छ । क्रमशः काम गरिरहेका छौं । समयको कार्यविभाजन गरेर जनताले आभास हुने काम महानगरले गर्छ ।
घोषणापत्रमा समाविष्ट भएका कुरा मात्र होइन, निर्वाचनताका अन्य दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रमा भएका राम्रा कुराको समेत सम्बोधन गर्ने काम मेरो कार्यकालमा हुन्छ । घोषणापत्रमा पनि तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्न सकिने मुद्दा समेटेका छौं ।
तत्काल गर्न सकिने काम गरिरहेका छौं र दीर्घकालीन रूपमा गर्ने कामका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौं । करिब डेढ दशकसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधि भए । लामो समयपछि आएका जनप्रतिनिधिसँग जनताका धेरै आकांक्षा छन् । म ती आशालाई निराशामा परिणत हुन दिनेछैन ।
तपाईंको कार्यकालमा कस्तो विराटनगर बनाउने योजना छ ?
विराटनगरलाई सुन्दर, सफा र हराभरा बनाउने संकल्पका साथ काम गरिरहेको छु । विराटनगरवासीको साथ सहयोग भएमा मैले साँच्चिकै सुन्दर महानगर बनाउने सपना देखेको छु । भावी पुस्ताले गर्व गर्न लायकको विराटनगर बनाउनेछु ।
यसका लागि एउटा व्यक्तिले मात्रै सम्भव छैन । हरेक महानगरवासीको साथ र सहयोग आवश्यक छ । किनभने हरेक महानगरवासीले विराटनगरलाई माया गर्नुप¥यो । आफ्नो दायित्वबोध गर्नुप¥यो । हरेक महानगरवासीले आफ्नो घरअगाडि सफा राखे समग्रमा विराटनगर नै सफा हुन्छ ।
पछिल्लो समय विराटनगरको औद्योगिक नगरको पहिचान मेटिँदै गएको छ, अब यो क्षेत्रको औद्योगिक विकासका योजना के छन् ?
विराटनगर ऐतिहासिक सहर हो । यहाँबाट वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएसँगै आधुनिक औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको थियो । त्यस्तै सोही मिलमा २००३ मा भएको मजदुर हड्ताल नै अन्त्यमा राणा अन्त्य गर्ने आन्दोलनको पृष्ठभूमि बन्न पुग्यो ।
यसर्थ राजनीतिक र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा विराटनगरको भूमिका महŒवपूर्ण छ । यसले गर्दा विराटनगरबाटै राजनीति र औद्योगिक क्षेत्रको विकास भएको छ । देशलाई चिनाउने यस स्थानमा रहेका उद्योगहरूको विकासका लागि मेरो सधैं साथ–सहयोग रहनेछ । महानगरको दायराभित्र रहेर उद्योगको विकासमा महानगर लाग्नेछ । यस क्षेत्रका उद्योगी, विज्ञहरूको सुझावका आधारमा म कार्य गर्नेछु ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न महानगरपालिकाको भूमिका के हुन्छ ?
महानगरले वातावरण बनाइदिने हो । यस क्षेत्रमा ठूलठूला उद्योगहरू छन् । यिनीहरूलाई अझ व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने मेरो योजना छ । सेजको अवधारणा मैले ल्याएको छु । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । यो स्वीकृत भयो भने सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा ३ सय १२ बिघा क्षेत्रमा यसको विकास र निर्माण गरिनेछ । यो विकास भयो भने धेरैले रोजगारी पाउनेछन् ।
पुराना तथा नयाँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्न गराउनका लागि महानगरले गर्नुपर्ने कुरालाई कन्जुस्याइँ गर्दैन । हामीले काठमाडांै गएर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेटेर सेज स्थापनाका लागि पहल गरिरहेका छौं । यो क्षेत्रमा सेजको अति आवश्यक छ । किनभने जग्गाको मूल्य यति बढेको छ कि यो क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरेर नयाँ उद्योग खोल्ने अवस्था छैन । सेज स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा विराटनगरको महŒवपूर्ण भूमिका हुँदाहुँदै विराटनगर किन पछि परेजस्तो लाग्छ ?
अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन भन्छन् । विराटनगर पनि त्यही हो । विराटनगर विकासको सवालमा केही पछाडि परेकै हो, तर अब त्यसो भइरहनेछैन । केही कुरा बन्नलाई समय आउनुपर्छ । अब विराटनगरको पालो आएको छ । अब विराटनगरको विकास हुन्छ । विराटनगरको साख जोगाउने र यसको विकास गर्ने कुरामा म निरन्तर लाग्नेछु ।
विराटनगरलाई पहिलाकै लयमा फर्काउन के गर्नुपर्ला ?
हामीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू अगाडि ल्याएका छांै । क्रमबद्ध रूपमा विराटनगरले मुहार फेर्छ । म सबै जनतालाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छु ।
विराटनगरमा रिङरोडलगायतका धेरै योजना अलपत्र छन्, यसलाई सम्पन्न गर्न तपाईंको भूमिका के रहन्छ ?
वास्तवमै यो १२ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ रिङरोड । मुआब्जा समस्याका कारण यो समस्या सिर्जना भएको हो । यस विषयमा परेको मुद्दा फिर्ता गराउने कामका लागि मैले पहल गरिरहेको छु ।
मलाई लाग्छ, यो काम म पूरा गर्छु । मेरै कार्यकालमा म यसलाई व्यवस्थित गराउनेछु । अहिले यही रोडका लागि ६ करोड रकम विनियोजन भएको छ । यो पर्याप्त छैन । यसका लागि आवश्यक बजेट मागेका छौं ।
विराटनगर मेयर रिङरोड